नेपाल आज | राष्ट्रवादको नाममा अराजकताको खेती ( भिडियोसहित)
कभर स्टोरी भिडियो Breaking News
राष्ट्रवादको नाममा अराजकताको खेती ( भिडियोसहित)
मङ्गलबार, ०८ पुष २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
सत्तारुढ दल नेकपा स्थायी कमिटी बैठक कर्मकाण्डी भएको प्रश्न सोही पार्टी भित्रबाट उठिरहेकाबेला नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवम पूर्व मन्त्री कर्णबहादुर थापाले यसरी पार्टीको नीतिविरुद्ध बोल्नेहरुलाई सस्तो लोकप्रियताको भोक लागेको संज्ञा दिएका छन् । आफनो विचार र असन्तुष्टि पार्टीको औपचारिक फोरममा राखिसकेपछि फेरि बाहिर आएर कराउनु ‘सस्तो लोकप्रियता’ बाहेक अरु केही हुन नसक्ने उनले बताए ।
नेता थापाका अनुसार पार्टीको संगठन, सरकार संचालनका विषय र सीमा तथा बहुचर्चित एमसीसीका विषयमा पार्टीले संयमतापूर्वक परिपक्व निर्णय गरेको छ । यी विषयलाई जथाभावी केही पनि भएन भन्दै नकारात्मक ढंगले उछाल्नु भनेको ‘ राष्ट्रवादको नाममा अराजकताको खेती’ मात्र भएको उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘ अहिले पार्टीमा एक दुई जना पार्टीको विधान र नीति विपरित बोलिरहेका छन् । उनीहरु आफूलाई मात्र सबथोक जान्ने ठान्छन् । मानौ देशको चिन्ता उनीहरुलाई मात्र छ । यो अनुशासनहीनता हो । यो प्रवृति चाँडै समाप्त हुन्छ । ’
थापाको प्रश्न छ, ‘भारत, चीन वा अमेरिकाको विरोध गर्दैमा राष्ट्रवादी हुने हो ? नेपालको हीतमा काम भैरहेको छ कि छैन भन्ने हेर्ने कि मित्र राष्ट्रहरुविरुद्ध विष वमन गर्ने ? ’
इण्डोप्यासिफिक र एमसीसीका विषयमा धेरै विवाद गर्नु पर्दैन । यसलाई सरासर पास गर्नुपर्दछ । जहाँसम्म भारतसँग सीमा मिचिएको कुरा छ यसमा कुटनीतिक पहल भैरहेको छ । भारतले पनि जवाफ पठाएर वार्ताका लागि तयार रहेको बताइसकेको छ । यो अवस्थामा अब खोजेको के ? नेतृत्वलाई गाली गरेर आफू मात्र ठीक हुँ भन्ने शैलीले पार्टी र देश कहाँ पुग्छ ?
शिवामाया नै सभामुख
नेता थापाले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने धारणा राखे । शिवमाया सभामुखका लागि सबै कुराले योग्य भएको उनको दावी छ । शिवमायालाई सभामुख नबनाए राजनीतिक रुपमा नकारात्मक सन्देश जानेछ ।
भ्रष्टाचार विरोधी सरकार
अहिले भ्रष्टाचारका जति काण्ड आइरहेका छन् ती सबै अहिलेको सरकारले उजागर गरेको हो । हिजो दिनमा भएको भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धान गरी सतहमा ल्याइ भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्ने स्थिति बनेको छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण ०४८ सालको घटना हो । अहिले आएर सरकारले छानबिन गर्दैछ । यसलाई त राम्रो भन्न सक्नु पर्यो नी ? अहिले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको उत्कृष्ट कदम नमान्ने ?
‘गोकर्ण रिसोर्ट लगायत एनसेल, सुनकाण्ड, वाइडबडी यी सबै विषय अहिलेको सरकारले उजागर गरेको हो । भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री दृढ हुनुहुन्छ । सम्पूर्ण विषयमा छानबिन भैरहेको छ । अन्य नयाँ विषयमाथि पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ । नेकपाकै नेतृत्वमा मुलक समृद्ध हुनेछ । ’ थापाको दावी छ ।